नेपाली फिल्म क्षेत्रमा ‘चकलेटी नायक’ को उपमा पाएका आर्यन सिग्देल अनपेक्षित रूपमा आफू कलाकारितामा आएको मान्छन् । साथीको उक्साहटमा अभिनयमा कदम हालेका उनी अन्ततः यही क्षेत्रमा रमाए र समय क्रममा स्थापित भए। ‘फिल्ममा नआएको भए सायद आर्मी वा लोकसेवा लडेर सरकारी जागिरे हुन्थेँ होला’, आर्यन भन्छन् । उनै आर्यन करिब ७ वर्षपछि अभिनेत्री रेखा थापासँग ‘रुद्रप्रिया’ मा देखिँदै छन् । ‘कसले चोर्‍यो मेरो मन’ पछि एकसाथ देखिन लागेको यो जोडीको फिल्म कात्तिक २ गते रिलिज हुँदै छ ।
थानकोटको हरिश कसरी फिल्ममा आर्यन बने ?
त्यतिखेर जीवनको लक्ष्य केही थियो ?
कलेज पढ्दै गर्दा मसँग कुनै लक्ष्य थिएन । म काँठ क्षेत्रको मान्छे । काँठको धेरैजसो मान्छेको उद्देश्य पढेर सरकारी जागिर खाने नै हुन्थ्यो । तर, त्यो बेला विद्यार्थी भएकाले कुनै लक्ष्य नसोची पढिरहेको थिएँ । म आर्मी कलेज पढेकाले आर्मीमा जान सक्थेँ
अभिनेता हुनु भनेको के रहेछ ?
अभिनय यात्राले व्यक्तिगत रुपमा आर्यनमा के परिवर्तन ल्यायो र के सिकायो ?
फिल्ममा आउनुअघि यस क्षेत्रप्रतिको धारणा के थियो ?
डेब्यू फिल्म ‘किस्मत’ मा काम गर्न कसरी जुर्‍यो ?
नाम किन परिवर्तन गर्नुभयो ?
रेखा थापासँग पहिलो भेट कहिले र कसरी भयो ?
फिल्म गर्न लाग्दा परिवारको प्रतिक्रिया के थियो ?
परिवारबाट एक थोपा पनि साथ थिएन । २/३ वटा फिल्म रिलिज भएपछि र हिट भएपछि मात्र ड्याडीले एप्रिसिएट गर्न थाल्नुभयो । त्यसअघि चाहिँ ‘काम न काज खाली आवारा भएर हिँडेको छ’ भनेर गाली सुन्नुपर्थ्यो । सुटिङका कारण कहिले हप्ता त कहिले महिनासम्म घर बाहिर हुन्थेँ । अहिले भने खुसी हुनुहुन्छ ।
फिल्ममा काम गर्न थालेको एक दशक हुन लाग्दा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
फिल्म चल्दा र नचल्दाको अवस्थामा कस्तो महसुस हुन्छ ?
कुनै निर्देशकसँग काम गर्ने रहर छ ?